JIGJIGA (CN) Jimce, 30, October, 2015 Furitaanka tartanka ciyaaraha 9 gobol iyo 4 maamul magaalo ayaa ka furmay xarunta DDSI ee Jigjiga. Tartankan ayaa lagu furay labada kooxod ee kala ah kooxda Gobolka Jarar iyo kooxda Maamulka Magaalada Q/Dahar. Kulankan oo aha mid maanka bulsho waynta ka dhex guuxayay, waayadana la wada sugayay ayay labada kooxood soo bandhigeen ciyaar aad u qurux badan. balse nasiib darro wax gool ah lama kala dhalin, ciyaartiina waxay ku dhamaatay barbaro 0 - 0 ah.
JIGJIGA (CN) Sabti, 31, October, 2015 Sidoo kale waxay ciyaar xaamasad kulul sidata dhex martay Gobolka Qoraxay Iyo Gobolka Faafan. Gobolka Qoraxay ayaa gallinkii horaba dhalliyay gool aad iyo aad u qurux badan oo ciyaarta xamaasad kulul ku dhaliyay, kumase ayna koobnayn goolkaas oo qudha ee kooxda Gobolka Faafan ayaa wacdaro kulul lasoo baxay gallinkii dambe ee ciyaarta iyagoo goolka barbar dhaca dhaliyay daqiiqadii 85aad halkaasoo ay ciyaartii ku dhamaatay barbar dhac 1 - 1.
JIGJIGA (CN) Sabti, 31, October, 2015 Kulamo xiiso badan ayaa manta oo sabti ah laga ciyaaray garoonka kubada cagta ee caasimada Jigjiga. Kulanka hore ee ciyaarta ayaa waxaa fooda is daray Gobolka Doollo iyo Gobolka Shabeele, halkaasoo ay ku dhex martay ciyaar aad iyo aad u xiiso badan. Shabeele ayaa gallinkii horaba gooool la hor martay, wuxuuna noqday gool xiiso u yeelay ciyaartii dhex martay labada kooxood. Hase yeeshee, gallinkii dambe ee ciyaarta ayay kooxda Gobolka Doollo goolka barbaraha ah dhalisay daqiiqadiihii ugu dambeeyay ciyaarta waxayna ciyaartii ku gabagabawday 1 - 1 .
Tartanka Ciyaara Maamulka Magaalada Godey
Tartanka Ciyaaraha Maamulka Magaalada Godey oo ka Furmay isla maamulka magaalada Godey
Xafladii furitaankana waxaad ka dheehataan muuqaalka hoos ku xusan.
Wixii warbixin ah ee danbana waxaan idinkala socodsiin doonaa bogayaga ciyaaraha ee cakaaranews
Ethiopia to benefit from Nigeria’s suspension
Munaasabad loo Qabtay Ciyaartoyadii Olympicada Itoobiya oo ay Kamid Ahaayen Ciyaartoyga DDS oo Guulo lagu Amaanay Usoo Hoyay Deegaanka March 24, 2010